Umsebenzi - izindaba zokuqashwa | Ezezimali Zomnotho
Zonke izindaba ngaye umsebenzi nokungasebenzi. Kulesi sigaba uzokwazi ukugcina usesikhathini nazo zonke izinguquko zomthetho ezenzeka ezingeni labasebenzi. Siphinde ukukwazisa mayelana main izinhlolovo zokuqashwa nokungasebenzi eSpain naseYurophu.
Ukuqashwa bekulokhu kungenye yezihloko ezikhathaza kakhulu izakhamizi, kulesi sigaba sewebhu sikunikeza lonke ulwazi oludingekayo ukuze uhlale usesikhathini nazo zonke izindaba nezindaba ezithakazelisayo ku indawo yokusebenza.
Ungakuvala kanjani ukungasebenzi ku-inthanethi isinyathelo ngesinyathelo
Por I-Encarni Arcoya kwenza Izinyanga ze-2 .
Ukwazi ukuthi ungavala kanjani ukungasebenzi kwe-inthanethi isinyathelo ngesinyathelo akunzima. Nakuba kukhona uhlelo ...
Por I-Encarni Arcoya kwenza Izinyanga ze-3 .
Wonke umsebenzi ufuna ukugcina umsebenzi wakhe. Kodwa-ke, kunezikhathi lapho, ngokuningi ...
Impela uzwile kaningi igama elithi freelance. Eqinisweni, singasho ukuthi yimfashini manje ...
Wake wezwa nge-EPA? Uyazi ukuthi yini? Lesi yisifinyezo sePopulation Survey ...
Kuyini ukuxoshwa kwenhloso
Por I-Encarni Arcoya kwenza Izinyanga ze-6 .
Ukuba nomsebenzi akusho ukuthi ngeke uxoshwe nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Empeleni, nje ...
Lapho ubusebenza isikhathi eside emsebenzini ofanayo, kwesinye isikhathi ukugqashuka kukwenza ungadlali e ...
Kuya ngokuya kujwayelekile ezinkampanini ukuthi ziqashe kancane bese zithanda ama-freelancers ukugwema ukukhokhela ...
Siyini iSitatimende Sabasebenzi
Por I-Encarni Arcoya kwenza Izinyanga ze-7 .
Zonke izimo zokusebenza, noma ngabe yini engathuthukiswa ezivumelwaneni ezihlanganisiwe, kungenxa yeSitatimende ...
Bala isisekelo sokulawula
Por I-Encarni Arcoya kwenza Izinyanga ze-10 .
Esinye sezikali ezibaluleke kakhulu kwezokuphepha Komphakathi, ngaphandle kokungabaza, isisekelo sokulawula. Kuyigama…
Cela impilo yomsebenzi: ifoni yamahhala
Por I-Encarni Arcoya kwenza Izinyanga ze-11 .
Isitifiketi sempilo yomsebenzi, noma impilo yokusebenza nje, yidokhumende ekhombisa isikhathi esiku ...
Gcina ukumiswa ngeselula
Namuhla siphila sinamathele kuselula. Kunjengokungathi, lapho siphuma, noma sisekhaya, iselula ...
Uyini umholo omncane kanye nomholo wangempela
Iyini inombolo yami yokuphepha komphakathi nokuthi ungayithola kanjani impinda
Imiphumela yesikhathi esizayo yamarobhothi nobuchwepheshe obusha emisebenzini
Ungazi kanjani izinsuku ezinikele ekuvikelekeni komphakathi?
Izivumelwano zabasebenzi zensimbi ezihlangene eSpain
Incwadi yokuxoshwa okungafanele
Ungayibala kanjani indawo ohlala kuyo
Ungasivala kanjani isiteleka nazo zonke izinyathelo zaso okufanele uzilandele
Uyini umholo oketshezi
Ungayifunda kanjani i-payroll futhi wazi ukuthi kulungile
Ukuntuleka kwemisebenzi, inkinga enkulu e-Italy
Imisebenzi eminingi kasomabhizinisi